6 nzira dzekuwedzera vatengi muEcommerce kuburikidza nemagariro network | ECommerce nhau
Masocial network ave chishandiso chine simba kuwana kukosha muhukama hwevanhu. Asi izvo vamwe vashandisi vasingazive ndezvekuti iyi yekutaurisa svikiro iri yatove imwe yedzimwe nzira dzemabhizimusi emagetsi kuve nzvimbo yekutanga yekutangira kuwedzera vatengi uye kutengesa. Nemhedzisiro izvo zvisati zvayerwa nekuda kwekukosha kwemutauri uyu munharaunda.
Zvinoenderana neongororo yemusika ichangoburwa, zvakaratidzwa kuti vangangoita makumi mapfumbamwe muzana evatengi pasi rese vanovimba kurudziro yeshamwari uye mhuri kupfuura chero imwe nzira yekushambadzira. Mupfungwa iyi, pasina kupokana kuti masocial network muCommerce yako anogona kuve mamwe emhando yepamusoro maturusi ekupa kuoneka kune rako bhizinesi, kusimudzira kutengesa kana kungokwezva huwandu hukuru hwevashandisi kubva panguva dzino chaidzo.
Icho chitsva chishandiso icho iwe chauinacho iwe kugutsa yako yehunyanzvi zvido kubva kune akasiyana maonero pane izvo zvinopihwa nemamwe marongero mukushambadzira kwedhijitari. Iko iwe kwaunofanirwa chete kuvhura account uye chengetedza chimwe chiitiko zvakafanana. Kushanda sekuratidzira kwezvigadzirwa, masevhisi uye zvinhu zvaunogona kupa kune vese vatengi. Uine bhenefiti yekuwedzera iyo iwe yaunogona kusvika kunzvimbo dzese pasi kana ichi chiri chako chekutanga.
1 Kubatsira kwenzvimbo dzekudyidzana padanho rehunyanzvi
2 Chii chekuita kuwedzera vatengi?
Kubatsira kwenzvimbo dzekudyidzana padanho rehunyanzvi
Chekutanga pane zvese, haufanire kuvhiringidza zvakanakira zvinopihwa neaya masosi enharaunda pazvinhu zvine chekuita nebasa rako rehunyanzvi. Kusiyanisa iwe kubva pane zvakanyanya kurongeka kana kurapwa kwega kwakagadzirirwa kune mamwe marudzi emabasa asina kana kana zvishoma kuita nebhizinesi rako kana chitoro chedigital. Kubva pane akajairika mamiriro ezvinhu, inguva yekuti iwe uone kuti ndeapi mabhenefiti akakosha zvikuru ayo masocial network anogona kukuunzira iwe padanho rehunyanzvi. Kufanana neinotevera iyo yatinokufumura pazasi:
Vhura mikana mitsva yebhizinesi
Iwe unofanirwa kuvhurika kune iyo itsva iyo matekinoroji matsva anokupa iwe uye izvi zvechokwadi zvinogona kuvhura mikova kumisika mitsva niches. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuwana vatsva vatengi kana vashandisi vaunogona kuchengetedza hukama hwakadzikama kwazvo kubva kune yekutengesa maonero.
Hapana mubvunzo kuti idzi nzira dzekutaurirana dzinoumba mota ine hunyanzvi yekumisikidza kusangana nevatengi Kubva kwaunogona kuvatumira chero nhau dzinogadzirwa mukambani yako yepamhepo. Izvo zvakakosha kuti iwe usazviganhurire iwe kune zvinyorwa, asi zvinokurudzirwawo zvakanyanya kusarudza zvekutarisa zvinhu (mafoto, audios, mifananidzo, nezvimwewo) kuti ugadzire chinongedzo nemumwe munhu ari muchiitiko ichi. Iwe unozoona kuti ino sisitimu inoshanda kana iwe uchigona kuishandisa nenzira kwayo uye pamusoro pezvose uchiziva nzira yekuisiyanisa kubva pakurapwa kwako pachako.
Wedzera kuonekwa kwechiratidzo
Kana masocial network achizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekugona kwavo kukuru kupa hunyanzvi pakutengeserana kwako kwemagetsi. Asi kuti chikamu ichi chebasa chinyatsoita, unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuteverwa nevazhinji vashandisi. Izvo zvakanyanya zvavari, zvirinani kune ako ehunyanzvi zvido, asi kuve wakasarudzika mune sarudzo. Izvi mukuita zvinoreva kuti chimiro chevateveri chinofanira kunge chakavakirwa pahunhu hwehunyanzvi, kwete zvemunhu. Ndokunge, kuwana mukana wakanyanya kwazvo wevatengi kwaunogona kutumira mameseji echiratidzo chako chekutengesa.
Kusiyana nemamwe maficha enhau, masocial network anokupa iwe kukurumidza kukuru kuti uvape iwo nhau dzichangoburwa. Zvinogona kutaurwa kuti munguva chaiyo vanozove nerunhare mbozha rutsigiro runodzidzisa rine chekuita nebhizinesi rako repamhepo. Iko kunongogara dambudziko chete mukuyera kuti ndeapi akanyanya kukosha mameseji aunofunga kutumira mune yako nyanzvi account. Iri dhijitari rekushambadzira zano iro rinogona kubatsira zvakanyanya muhukama hwako nevazhinji vakagadzika vashandisi kana vatengi.
Catalog diffusion chiteshi
Kana izvo zvaunoda kuratidza zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa, hongu uri pamberi pechimwe chezvishandiso zvakakodzera. Nesimba shoma uye wakasununguka kwazvo, unogona kutumira izvo zvinhu zvauri kushambadzira kubva kune rako bhizinesi chirongwa kune vatengi. Izvi zvichave zvinonyanya kugamuchirwa kupfuura kubva kune imwe ruzivo midhiya. Iine iyo yakawedzera kukosha iyo pakupera kwezuva iwe unenge usina chero mhando yemiganhu mune iri basa. Chete izvo zvinobva kune nyanzvi deontology. Kugara uchiita zviitiko zvako, asi usingashandise zvisizvo meseji inonyengetedza.
Ratidza bhizinesi rako uzivi
Kunyangwe iwe uchiziva kuti masocial network kubva pane ako maonero ekuona anobatsira iwe kuti vamwe vazive iwe zvishoma zvirinani, unogona kushandisa imwecheteyo zano asi padanho rekambani. Uine chinangwa chakanyatso tsanangurwa uye icho hapana chimwe kunze kwekuzvitsauranisa kubva kumakwikwi. Mupfungwa iyi, masocial network anogona kuita zvishamiso uye kunyange kugadzirisa kugadzirwa mukati maro kuitira kuti kubva zvino bhizinesi rako repamhepo riwedzere kubatsira. Zvirinani hazvizokubhadhare iwe kuita kwakanyanya kuyedza kana iwe wakambove uchive wakabatanidzwa mumasocial network kukurudzira kwako pachako pamberi Ramba uchifunga kuti mamakanika anenge akafanana uye haufanire kuendesa nhanho nyowani mukuita.
Chii chekuita kuwedzera vatengi?
Chimwe chezvinangwa zvebhizimusi kana dhijitari chitoro ndechekutora vatengi vazhinji kana vashandisi kuti vave nehanya nebasa redu rebhizinesi Kubva pane ichi chirevo, zvichakubatsira iwe kuti uzive maitiro ekuita chiito ichi kubva kune makuru masocial network aripo panguva ino. Iwe ungade here kuti isu tikupe iwe nezvimwe zvirevo kuti uwane zvinangwa zvako? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti unogona kuendesa kunze kwekuedza kukuru kunewe.
Natsiridza mukurumbira webhizinesi rako repamhepo
Chekutanga pane zvese, usakanganwa kuti maakaunzi ehunyanzvi mune ino yekutaurisa yepakati chiratidzo chakasiyana chekuratidzira zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Asi pamusoro pezvimwe zvinhu, iwe unofanirwa kuremekedza mufananidzo wekambani uye kuvimba nemitengo yechiratidzo chekutengesa kuti uiendese kune chimwe chikamu cheichi chiitiko, ndiko kuti, vatengi. Kuburikidza nechishandiso chinokutendera iwe kuziva izvo zvinodiwa nevatengi vako uye chii chakanyanya kukosha: sangana navo nekukurumidza.
Kuwedzera kutaurirana kwemvura pakati pemapati maviri
Masocial network zvakare chishandiso chakakodzera kukudziridza kusangana kwakananga uye nekukurumidza nevatengi. Kusvika padanho rekuti hukama hwekutengesa hunogona kutarisirwa zvakanyanya. Asi nekufunga kumwe chete kwaunofanira kuchengeta mundangariro izvozvi: zvichave zvakafanira kuti vashandisi vashande chaizvo uye vagovane zvemukati kana maonero newe. Kana iri neiyi nzira, hapana mubvunzo kuti iwe uchave uwedzere kumberi ichi chikamu mune chero pasocial network iwe uripo.
Ichakubatsira iwe kuti uzive vatengi vako zvirinani
Iyi migero mukutaurirana kwakananga inogona kuumbwa mune chimwe chinhu chinopfuura kusangana. Iyo inzira inogona kushandiswa kusarudza vatengi vako uye nekudaro zvichave zvakakosha kuzvichengeta kubva panguva yekutanga. Tisati tatora danho iri, isu tinofanirwa kudzidza chimiro chevatengi vedu uye nekuona iwo maratidziro avanosangana nawo. Kuti usarudze yakanakisa pasocial network pane maprofiles evanhu ava.
Gadzira zvemukati nguva dzose
Izvo hazvina kukwana kungoona vangangove vatengi. Kana zvisiri, pane kudaro, isu tinofanirwa kuvapa izvo zvemukati izvo zvinovafadza uye izvo zvinonyanya kukurudzira kukurudzira zviito zvekutaurirana zvebhizinesi redu. Iri zano rinoshanda kwazvo rekuzvichengeta kubva panguva yekutanga. Pasina kuvashungurudza, asi kugadzira zvinoshanda uye zvinogara kwenguva refu zvisungo zvemubatanidzwa maererano nekusingaperi. Ichave ndiyo yakanaka yekutanga poindi yekutora zviito zvako mukutengesa zvemagetsi. Zvichida mhedzisiro yazvo haina kunyatso kujeka munguva pfupi, asi panzvimbo yepakati nepakati, sezvauchaona kubva zvino zvichienda mberi.
Kugadzirwa kwemashambadziro ekushambadzira
Unogona kusazviziva, asi masocial network zvakare anotendera iwe kuti uite zviito zvekushambadzira zvakananga. Pane chikonzero chakasimba kwazvo chinosimbisa iyi pfungwa: mutengo wayo wemari wakaderera kwazvo kana uchienzaniswa nemamwe mamodheru uye, kune rimwe divi, mhedzisiro inowanikwa inogona kuve yakanakisa. Ndokunge, uine optimization yezve zviwanikwa zvaratidzwa. Nepo kune rimwe divi, masocial network anosvika kuvanhu vazhinji kupfuura mamwe midhiya uye ichipa hukuru hukuru uye kuoneka kune iro bhizinesi redhijitari.
Kana iwe ukatevera aya ese matipi, zvirokwazvo nekutsungirira kushoma iwe uchasvika kune vakawanda vatengi, uye chii chakanyanya kukosha, kutengesa kuchawedzera. Ndokunge, shure kwezvose, izvo ndezvei nezve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » 6 nzira dzekuwedzera vatengi muEcommerce kuburikidza nehukama hwemagariro